मरियम को सतत virginity – 2माछा
घर / चर्च / मरियम / मरियम को सतत virginity
क्याथोलिक किन विश्वास गर्छन् मरियम कुमारी रहेका, बाइबल यसो भन्छ जब येशूले भाइबहिनीहरू थिए?
र, मरियमको virginity किन क्याथोलिक गर्न महत्त्वपूर्ण छ?
सरल जवाफ छ: क्याथोलिक विश्वास यो सत्य हो किनभने मेरीको जीवनकालमा भर कुमारी रहेका. यो सत्यनिष्ठा ख्रीष्टको चर्च द्वारा घोषणा एक शिक्षण छ, “को खाँबो र सत्यको जग” (पावलको हेर्न तिमोथीलाई पहिलो पत्र 3:15); Sacred परंपरा मार्फत प्रकट; र पवित्र धर्मशास्त्र संग agreeance मा (पावलको हेर्न थिस्सलोनिकीहरूलाई दोस्रो पत्र 2:15).
त्यसैले, क्याथोलिक विश्वास छ कि “भाइहरू र प्रभु को बहिनीहरूले” बाइबलमा उल्लेख गरिएका थिए येशूको नजिक-सम्बन्ध, तर भाइबहिनीहरूको छैन (हामी तल विस्तार व्याख्या छौँ रूपमा).
अन्ततः, र सबै भन्दा एकदम, मरियमको सदैव virginity किनभने यो येशूको बारेमा के affirms को ख्रीष्टियन गर्न आवश्यक छ. अन्ततः, यो विश्वास ख्रीष्टको पवित्रताको गर्न र अवतार को विशिष्टताको लागि अंक: परमेश्वरको बनेर मानिसको कार्य.
अगमवक्ता इजकिएल राजकुमार घोषणा “बाहिर जानेछौ, र उहाँले खुस्केको छ पछि गेट बन्द गरिनेछ” (देख्न इजकिएल 46:12), र चर्च यो ख्रीष्टको जन्म र मरियमको आजीवन virginity एउटा सन्दर्भ हुन बुझ्नुहुन्छ (सेन्ट एम्ब्रोस हेर्न, एक भर्जिन को Consecration 8:52). त्यसैले, जसले को उहाँले किनभने मरियम येशूको जन्म पछि उनको virginity राख्ने भनेर फिटिङ थियो: मानव रूप मा देवता!
बाइबल को, एक मोशाको कथा र जल झाडी मा झल्काउन सक्छौं. मोशाले झाडी नजिक रूपमा, प्रभु भन्नुभयो, “नजिक छैन; आफ्नो खुट्टा आफ्नो जूता पन्छाउन, जो मा तपाईं खडा छन् स्थानका लागि पवित्र भूमि हो” (प्रस्थान 3:5).
यो कथा हामीलाई दुई तरिकामा मरियमको सदैव virginity बुझ्न मदत.
पहिलो, हामी प्रभुको उपस्थिति त्यहाँ descended थियो किनभने जमीन पवित्र थियो हेर्न. हामी यही परमेश्वरको बिर्सनु हुँदैन, बलिरहेको पोथ्रो मोशालाई देखा पर्नुभयो गर्ने, मरियम को गर्भमा गर्भधारण थियो.
त्यसैले, यो केवल त्यो भन्न फिटिङ हुनेछ, त्यो पवित्र भूमि जस्तै प्रस्थान, पवित्र गर्न आवश्यक, विशेष तयार, छ, प्रभुहरूका राजाहरूको राजा र प्रभु प्राप्त गर्न.
दोस्रो, मण्डली पिता जलिरहेको झाडी नै छवि देखे–एक झाडी aflame, अझै खपत छैन–उनको virginity forfeiting बिना मरियमको दिने जन्म एक रूपक रूपमा. जस्तै, चौथो शताब्दीमा, Nyssa को ग्रेगरी यस्तो लेखे, “के झाडी को ज्वाला त्यस समयमा पूर्वचित्रण गऱ्यो थियो खुल्लमखुल्ला वर्जिन को रहस्य मा प्रकट भएको थियो. … पर्वतमा रूपमा झाडी जलाइएको तर खपत थिएन, त्यसैले भर्जिन ज्योति जन्म दिए र भ्रष्ट थिएन” (ख्रीष्टको जन्म मा).
मूलतः, मरियमको सदैव virginity संसारलाई घोषणा कि किनभने ख्रीष्ट त पवित्र थियो–परमेश्वरले आफूलाई–उहाँलाई एक साधारण स्त्रीको गर्भमा गठन गरेको छ लागि गरिएको यो अनुचित भएको थियो; र, त्यसै गरी, लागि पापी उहाँलाई पछि त्यही गर्भबाट आएका छन्–गर्भमा विशेष मसीहको सहन तयार. फेरि, इजकिएल विचार, “[राजकुमार] बाहिर जानेछौ, र उहाँले खुस्केको छ पछि गेट बन्द गरिनेछ।”
प्रभुको जन्म को समयमा मरियमको virginity अगमवक्ता यशैया संकेत, जसले भन्छ, “हेर, कुमारी गर्भ धारण र एक छोरा सहन पर्छ, र आफ्नो नाम Immanuel कल पर्छ” (7:14; देख्न मत्ती 1:23 र लूका 1:27). यशैया, जे भएपनि, गोदभराई मा उनको virginity कुरोलाई पुष्टि र असर मा. यसबाहेक. मरियमको प्रतिक्रिया, प्रधान दूत गरेको घोषणा गर्न त्यो गर्भ धारण र एक छोरा सहन थियो–“पछि म मानिस थाहा छैन कसरी यो हुन सक्छ?” (लूका 1:34)–त्यो एक कुमारी थियो स्पष्ट सुझाव. उनको प्रतिक्रिया शायद अर्थमा अन्यथा बनाउँछ.
उनको perpetually virginal अवस्था मा टैग: छ सुलेमानको गीत, जो भन्छन्, “बन्द एक बगैचा मेरी बहिनी हो, मेरो दुलही, छाप एक फोहरा” (4:12).
हामी त्यो र यूसुफ betrothed र पछि थिए विवाह तथ्यलाई दिइएको यो बुझ्न कसरी गर्न? त्यहाँ मरियम सानैदेखि एक consecrated कुमारी रूपमा प्रभु समर्पित थियो धारण जो प्राचीन परम्परा छ; र त्यो उमेर आउँदा कि यूसुफ सुम्पिएको थियो, एक त्यो भन्दा धेरै पुरानो विदुर (CF. जेम्स को Protoevangelium).
केही अवस्थामा विवाह भित्र नैतिक शुद्धता को अवधारणा छ, साँच्चै, एक बाइबलीय अवधारणा. जस्तै, राजा को पहिलो पुस्तक मा 1:4, राजा दाऊद प्रथम लिन्छ, Abishag, पत्नी आफ्नो बुढेसकालमा उहाँलाई हेरचाह गर्न हुन, तर उनको संग सम्बन्ध बाट abstains.
यसबाहेक, कोरिन्थीहरूलाई पहिलो पत्र, पावलले यसलाई स्वीकार गर्न सक्छन् गर्नेहरूलाई consecrated ब्रहृमचर्य वा सदैव betrothal को एक राज्य सिफारिस (देख्न 7:37-38).
स्पष्ट छ, उनको प्रकाश मा परमेश्वरको छोरा सहन कल, यूसुफलाई मरियमको विवाह साधारण टाढा थियो. यो भर्जिन र उनको छोरा को हेरविचार र सुरक्षाका लागि परमेश्वरले नियुक्त गरिएको थियो–संसारबाट एक समय को लागि लुकेको को अवतार राख्न. “मरियम को virginity, उनको दिने जन्म, र पनि प्रभुको मृत्यु, यो संसारको राजकुमार लुकेका थिए,” एन्टिओक को Ignatius लेखे, प्रेरित यूहन्नाको चेला, बारेमा वर्षमा 107: “–तीन रहस्य ठूलो स्वरमा घोषणा, तर परमेश्वरको मौन मा गढा” (एफिसीहरूलाई पत्र 19:1).
मा मत्ती 1:19, पवित्र धर्मशास्त्र यसो भन्छ Jospeh थियो “एक बस मानिस।” त्यसैले, सुने भएको मरियम अर्को एक बच्चा गर्भधारण थियो, उहाँले उसलाई चुपचाप उनको बचत गर्न मोशाको व्यवस्था अन्तर्गत सम्भाव्य कार्यान्वयन देखि राख्न समाधान (अनुसार व्यवस्था 22:23-24).
प्रभु हस्तक्षेप, हुनत, सपनामा एउटा दूत मार्फत उहाँलाई बताउन, “मरियम आफ्नो पत्नी लिन डर छैन, उनको गर्भधारण छ जो कि लागि पवित्र आत्माको छ; त्यो एक छोरा सहन हुनेछ, र तपाईं उहाँको नाउँ येशू कल पर्छ, लागि उहाँले आफ्नो पाप आफ्ना मानिसहरूलाई सुरक्षित हुनेछ” (मत्ती 1:20).
यूसुफ यी शब्दहरू अर्थ छैन लिएको थियो, हुनत, मरियम शब्द को साधारण अर्थमा पत्नी हुन थियो. रूपमा मिलान को सेन्ट एम्ब्रोस लेखे,
“न त यो धर्मशास्त्र भन्छन् कि कुनै पनि फरक पार्छ: 'यूसुफले आफ्ना पत्नी लिएर मिश्र गए’ (मत्ती. 1:24; 2:14); एक मानिसलाई espoused कुनै पनि महिला को लागि पत्नी को नाम दिइएको छ. यो विवाह वैवाहिक शब्दावली कार्यरत छ कि सुरु गर्ने समय हो. यो विवाह बनाउँछ कि virginity को deflowering छैन, तर वैवाहिक सम्झौता. केटी वैवाहिक सुरु कि जुवा स्वीकार गर्दा यो छ, त्यो शारीरिक पतिको थाहा आउँदा छैन” (एक भर्जिन को Consecration र मरियम को सदैव virginity 6:41).
त्यो जन्माई परमेश्वरको पुत्र पवित्र आत्माको उनको पहिलो पति गरे (प्रति लूका 1:35); र यूसुफ अर्को जोडीसित वैवाहिक सम्बन्ध गर्न कानुन अन्तर्गत निषेध गरिएको थियो.
यस बारेमा के “भाइहरू र प्रभु को बहिनीहरूले?”
पहिलो, यसलाई त्यहाँ धर्मशास्त्रको पूरै को प्रसङ्ग बाहिर धर्मशास्त्र देखि पद उद्धरण मा एक खतरा छ भनेर औंल्याए गर्नुपर्छ. येशूले प्रेरित यूहन्नालाई मरियम entrusts भन्ने तथ्यलाई, उदाहरणका लागि, बलियो संकेत उहाँले वास्तविक भाइबहिनीहरूको थियो छैन (देख्न यूहन्ना 19:27). यदि लागि मरियम अन्य छोराछोरी भए, येशूले हेरचाह गर्न परिवारलाई बाहिर सोध्न छैन हुनेथियो उनको. (एभान्जेलिकल सर्कलमा केही कर्षण प्राप्त यो विरुद्ध एक तर्क येशूले यूहन्ना गर्न मरियम सुम्पिएको भन्ने धारणा छ किनभने याकूब र प्रभुको अन्य “भाइहरू” अझै थिएनन् मसीहीहरूले. तर यो तर्क tenuous छ. यदि यो मामला थिए, एक सुसमाचारका पुस्तकहरूमा यो प्रभाव केही विवरण दिन आशा थियो. येशूले व्याख्या बिना यूहन्नालाई मरियम दिन्छ भन्ने तथ्यलाई मरियम कुनै अन्य बच्चाहरु थिए संकेत गर्छ।)
कसरी, त्यसपछि, हामी जस्तै पद व्याख्या गर्ने हो मत्ती 13:55, भीड टिप्पणी मा कुन मान्छे, “यो सिकर्मी छैन छोरा छ? मरियम आफ्नो आमा र जेम्स हुन थाह छैन, यूसुफ, सिमोन र यहूदा आफ्ना भाइहरूलाई? आफ्नो बहिनीहरूले हाम्रो छिमेकी हो?”
क्याथोलिक स्थिति यी कि “भाइहरूले” र “बहिनीहरूले” नजिक नातेदार थिए, यस्तो cousins ​​रूपमा, तर भाइबहिनीहरूको छैन, कसैको नातेदारले कल पुरातन यहूदी अनुकूलन संग सहमत “भाइ” (प्रति उत्पत्ति 13:8; 14:14; 29:15, एट अल।). पोप यूहन्ना पावलले महान् लेखे, “यो कुनै खास शब्द शब्द 'भान्जा' व्यक्त गर्न हिब्रू र अरमाइक मा अवस्थित छ सम्झे गर्नुपर्छ, र अवधि 'भाइ भनेर’ र 'बहिनी’ त्यसैले सम्बन्ध धेरै डिग्री समावेश।”1
यसबाहेक, यसलाई अन्यत्र प्रकट गरिएको छ मत्ती कि “याकूब र यूसुफको” वास्तवमा विभिन्न मरियम को छोराहरू थिए, क्रुसको को खुट्टा मा महिला को आराम संग जो उभिएर इस्टर बिहान चिहानमा मरियम मग्दलिनी सँगसँगै (27:55-56; 28:1).
यो अन्य मरियम सामान्यतः Clopas को पत्नी हुन विश्वास छ, येशूको एक मामा हुन सक्छ (देख्न यूहन्ना 19:25; पनि Eusebius हेर्न, मण्डली इतिहास 3:11).2 यो कुरा बताइरहेका, यसबाहेक, कि प्रभुको “भाइहरू” कतै धर्मशास्त्र मा गर्न मरियम को छोराहरू उल्लेख गर्दै, येशू अक्सर भनिन्छ (देख्न मत्ती 13:55; मार्क 6:3, एट अल।).
त्यहाँ मरियमको सदैव virginity को विरोधीहरूले अक्सर उद्धृत कि अन्य दुई सुसमाचारको पद हो: मत्ती 1:25 र लूका 2:7.
मत्ती 1:25 भन्छन् कि यूसुफ “त्यो एउटा छोरो जन्माई अघि कुनै पनि समयमा उनको साथ कुनै सम्बन्ध थियो।” लुडविग OTT मा बताएअनुसार क्याथोलिक Dogma को आधारभूत, हुनत, यो पद “ठोकुवा(को) अप समय मा एक निश्चित बिंदु वैवाहिक consummated थिएन भनेर, तर यो पछि consummated थियो कि कुनै पनि हालतमा” (तन पुस्तक, 1960, पृ. 207). को लक्ष्य मत्ती 1:25 येशूले कुनै पार्थिव पिता थियो अभिवचन थियो, र साँच्चै परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो. यो येशूको पछि यूसुफ र मरियमको सम्बन्ध बारे केहि सुझाव गर्न चाहनुभएको थिएन’ जन्म. विचार शमूएलको दोस्रो पुस्तक 6:23, जो भन्छन् कि मरियम “उनको मृत्युको दिन कुनै बच्चा थियो।” स्पष्ट, यो होइन त्यो एक बच्चा थियो पछि उनको मृत्यु. मा मत्ती 28:20, येशूले आफ्ना अनुयायीहरूलाई संग हुन प्रतिज्ञा “उमेर को बन्द गर्न।” फेरि, यो होइन उहाँले त्यस बिन्दु परे तिनीहरूलाई हुन हुनेछैन.
मा लूका 2:7, येशूले मरियमको भनिन्छ “पहिलो-जन्म।” तर, रूपमा पोप यूहन्ना पावलले बताए:
“शब्द 'जेठो,’ शाब्दिक अर्थ 'अर्को द्वारा preceded एक बच्चा’ र, नै, अन्य छोराछोरी अस्तित्व कुनै सन्दर्भ बनाउँछ. यसबाहेक, को इंजीलवादी बालक को यो विशेषता जोड, पछि यहूदी व्यवस्था गर्न उचित केही दायित्व जेठो छोरा को जन्म लिङ्क थिए, आमा अन्य छोराछोरीहरूलाई जन्म दिएको छ सक्छ कि को स्वतन्त्र. त्यसैले हरेक मात्र छोरालाई थियो किनभने यी नुस्खे विषय थियो 'पहिलो प्यारो’ (CF. लूका 2:23)” (“मण्डली 'आजसम्म भर्जिन' रूपमा मरियम प्रस्तुत”)
माइकल O'Carroll, यसबाहेक, रिपोर्ट, “मिश्रको यहूदी दफन अभिलेखमा, प्रथम शताब्दीमा देखि डेटिङ, … सेन्ट आधारित मरियमको सदैव virginity विरुद्ध आपत्ति जवाफ मद्दत गर्छ. शब्द को लूका उपयोग 'पहिलो-जन्म’ (prototokos) (2:7). जसले उनको पहिलो बच्चा को जन्म पछि मृत्यु एक महिला वर्णन गर्न यस मामला मा यसको प्रयोग गरेर अन्य छोराछोरी नबुझाउन गरे शब्द देखाइएको छ, जो स्पष्ट अरूलाई थियो सकेन छन्” (Theotokos: अनमोल भर्जिन मरियम को एक Theological विश्वकोश, माइकल Glazier, 1982, पृ. 49).
मण्डली पिता के?
दुवै मरियमको सदैव virginity भन्दा विवाद मा पक्ष भएकोले, समर्थक र साथ, आफ्नो स्थिति समर्थन गर्न धर्मशास्त्रीय तर्क बनाउन, हामी निर्धारण गर्न कसरी गर्ने सही छ? कसले धर्मशास्त्र सही व्याख्या छ, को authentically प्रेषितहरूको जस्तै तरिकामा?
समर्थन प्रदान गर्ने एउटा तरिका ख्रीष्टियन पुरातन ऐतिहासिक लेखहरू परामर्श छ, सामान्यतः प्रारम्भिक चर्चका फादरहरूले लेखोटहरूमा रूपमा चिनिने.
अलेक्जेन्ड्रिया को Clement, उदाहरण को रुपमा, तेस्रो शताब्दीको सुरुमा यस्तो लेखे, “यो आमा एक्लै दूध बिना थियो, किनभने त्यो एक्लै पत्नीले भएन. त्यो एक पटक भर्जिन र आमा दुवै छ” (सन्तानको प्रशिक्षक 1:6:42:1).
Clement गरेको छात्र, स्रोत, कि शताब्दीको पहिलो दशक मा, पुष्टि भनेर मरियमले “कुनै अन्य छोरा तर येशूले थियो” (यूहन्ना मा टीकाओं 1:6). अन्य ठाउँमा, तिनले यस्तो लेखे, “र म येशूको पहिलो-फल नैतिक शुद्धता मा हुन्छन् जो शुद्धता मानिसहरूलाई थियो कारण अनुरूप यो विचार, र मरियम महिला बीच थियो; लागि यो pious बतान कुनै पनि अन्य उनको भन्दा virginity को पहिलो-फल थिए” (मत्ती मा टीकाओं 2:17).
आफ्नो extravagant प्रशंसा सहित उनको, Athanasius (घ. 373) रूपमा मरियम वर्णन “कहिल्यै भर्जिन” (को Arians विरुद्ध Discourses 2:70).
करिब 375, Epiphanius तर्क, “dared गर्ने कुनै पनि प्रजनन कसैले पवित्र मरियम नाम कुरा गर्न कहिल्यै थियो, र प्रश्न भइरहेको, तुरुन्तै थप्न गरे, 'यो भर्जिन?'” (Panarion 78:6).
“निश्चय,” पोप Siricius मा यस्तो लेखे 392, “हामी तपाईंको श्रद्धाको पूर्ण जायज थियो कि अस्वीकार गर्न सक्दैन मरियमको छोराछोरीको स्कोर मा उहाँलाई हप्काउनु मा, र तपाईंले असल कारण थियो कि विचार मा horrified गर्न अर्को जन्म जो देखि ख्रीष्टको शरीरका अनुसार जन्म भएको थियो नै virginal गर्भबाट जारी हुन सक्छ” (Anysius गर्न पत्र, थिस्सलोनिकीका को बिशप).
एम्ब्रोस मा टिप्पणी 396, “तिनको अनुकरण, पवित्र आमा, जसले उनको मात्र असाध्यै प्रिय पुत्रलाई सामाग्री सद्गुण एउटा उदाहरण त ठूलो निस्केको सेट; न लागि sweeter छोराछोरी, न त भर्जिन अर्को छोरा सहन गर्न सक्षम हुनुको सान्त्वना खोजी गरे” (पत्र 63:111).
हिप्पो को अगस्टिनको (घ. 430) remarked, “कुमारी गोदभराई, एक भर्जिन असर, एक भर्जिन गर्भवती, एक भर्जिन निस्कने ल्याउन, एक भर्जिन सदैव. तपाईं किन यो मा आश्चर्य गर्छन्, हे मानिस? परमेश्वरको यसरी जन्मन लागि यो फिटिङ थियो, उहाँले एक मानिस बन्न deigned गर्दा” (उपदेश 186:1).
पोपको लियो महान् मा घोषित 449, “उहाँ आफ्ना भर्जिन आमा को गर्भमा भित्र पवित्र आत्माको गर्भवती भएको थियो. त्यो virginity को हानि बिना उहाँलाई निस्कने ल्याए, त्यो आफ्नो हानि बिना उहाँलाई गर्भधारण पनि रूपमा” (मेरो लागी 28). अन्य ठाउँमा पनि Pontiff लेखे, “एक भर्जिन गर्भवती लागि, एक भर्जिन खन्नु, र एक भर्जिन त्यो बाँकी” (को Nativity को भोज मा प्रवचन 22:2).
त्यसैले, आज हामी तल विश्वास को प्रारम्भिक वर्ष देखि यस शिक्षाको एउटा ऐतिहासिक निरन्तरता पाउँछौं.
हेर्नुहोस् “मण्डली 'आजसम्म भर्जिन रूपमा मरियम प्रस्तुत;'” L'Osservatore Romano, अंग्रेजी मा साप्ताहिक संस्करण, सेप्टेम्बर 4, 1996. ↩
“यो विरुद्ध एक तर्क, हुनत,” अवलोकन कार्ल Keating, “जेम्स अन्यत्र छ कि छ (MT 10:3) अल्फयसको छोरा रूपमा वर्णन गरिएको, जो मतलब भनेर मरियमले, जसले त्यो थियो, Cleophas र अल्फयसको दुवै को पत्नी थियो. एक समाधान त्यो एक पटक राँडो थियो छ, त्यसपछि remarried. थप शायद अल्फयसको र Cleophas (ग्रीक मा Clopas) एउटै व्यक्ति हुन्, विभिन्न तरिकामा ग्रीक मा देखि अल्फयसको लागि अरमाइक नाम अनुवाद गर्न सकिएन, या त अल्फयसको वा Clopas रूपमा. अर्को सम्भावना अल्फयसको आफ्नो यहूदी नाम समान एक ग्रीक नाम लिए छ, शाऊल नाम पावलले गरे कि तरिका” (क्याथोलिक चर्च र Fundamentalism, Ignatius प्रेस, 1988, पृ. 288). ↩